တရုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုလာမီတာ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Polarimeter > Digital Enhanced Polarimeter > ဒစ်ဂျစ်တယ် Polarimeter
1. ဒစ်ဂျစ်တယ် Polarimeter နိဒါန်း
1- တိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် Peltier အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု၊
2- optical rotation/specific rotation/concentration/Brix နှင့် စိတ်ကြိုက်မုဒ်များ ရှိပါသည်။
3- LED အအေးမီးအရင်းအမြစ်သည် ရိုးရာဆိုဒီယမ်မီးခွက်နှင့် tungsten ဟေလိုဂျင်မီးခွက်တို့ကို အစားထိုးသည်။
4- သေတ္တာသည် 200MM အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုပြွန်နှင့် 100MM အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုပြွန်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
5- အဆင့်များစွာသော အခွင့်အာဏာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
6: 8 လက်မအရွယ် ထိတွေ့ရောင်စုံစခရင်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော လုပ်ဆောင်ချက် မျက်နှာပြင်။
7- 21CFR လိုအပ်ချက်များ (အီလက်ထရွန်းနစ်လက်မှတ်၊ ဒေတာခြေရာခံနိုင်မှု၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ ဒေတာဆော့ဖ်ဝဲဆန့်ကျင်ရေးနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ)၊
8- GLP GMP လက်မှတ်သတ်မှတ်ချက်များကို အပြည့်အဝလိုက်နာပါ။
2. ဒစ်ဂျစ်တယ် Polarimeter ပါရာမီတာ
ထုတ်ကုန်အမည်- ဒစ်ဂျစ်တယ် Polarimeter
လှည့်ခြင်း၊ အတိအကျ ကောက်နှုတ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ သကြားပါဝင်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ဖော်မြူလာ
LED အအေးခံ အလင်းရင်းမြစ် + တိကျစွာ စွက်ဖက်မှု စစ်ထုတ်မှု
တစ်ခုတည်း၊ အများအပြားနှင့် ဆက်တိုက်တိုင်းတာခြင်း။
Optical လည်ပတ်မှု ± 90°
သကြား ± 259° Z အတွက်
± 0.004 °
10âƒ-50â”ƒ (Peltier အပူချိန်ထိန်း)
၈ လက်မ TFT စစ်မှန်သောအရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
ပုံမှန်စမ်းသပ်ပြွန်များ- 200 မီလီမီတာ၊ 100 မီလီမီတာ ဘုံအမျိုးအစား၊ 200 မီလီမီတာ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစား (အရှည်အမျိုးမျိုးရှိသော Hastelloy အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုပြွန်များကို ရွေးချယ်နိုင်သည်)
အထွေထွေသုံး ပရင်တာ၊ WiFi ပုံနှိပ်ခြင်း။
ဟုတ်သည် / အဆင့်လေးဆင့် အာဏာပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု
USB၊ RS232၊ VGA၊ Ethernet
စွမ်းရည် 50 မီလီမီတာ နှင့် 200 မီလီမီတာ ရှည်လျားသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုပြွန်၊ မောက်စ်၊ ကီးဘုတ်ချိတ်ဆက်မှု၊ ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက် ပရင်တာ/ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ပရင်တာ
220V ±22V၊ 50Hz ± 1Hz၊ 250W
3. ဒစ်ဂျစ်တယ် Polarimeter အင်္ဂါရပ်
1- Built-in Parpaste အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု၊ တိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
2- လည်ပတ်ခြင်း/တိကျသော curl/အာရုံစူးစိုက်မှု/သကြားဒီဂရီနှင့် စိတ်ကြိုက်မုဒ်များ ရှိပါသည်။
3- ရိုးရာ ဆိုဒီယမ်မီးခွက် နှင့် ဟေလိုဂျင် တန်စတင် မီးအိမ် အစား LED အအေး အလင်းရောင် အရင်းအမြစ်၊
4- 21CFR အပိုင်း 1 စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ ဆေးဝါးနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် လက်မှတ်၊
5: ကွန်ရက်ပုံနှိပ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ဒေတာစာရင်းအင်းပြန်လည်ရယူခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
6- Multi-level အခွင့်အာဏာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အခွင့်အာဏာကို လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
7:10 လက်မ ထိတွေ့ရောင်စုံစခရင်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော လုပ်ဆောင်ချက် မျက်နှာပြင်။
8- စနစ်သည် အလိုအလျောက် ချိန်ညှိစနစ် ပါရှိသည်။
9- GLP GMP လက်မှတ်ကို လိုက်နာပါ။
1. ဒစ်ဂျစ်တယ် Polarimeter ကို ဆေး၊ အစားအစာ၊ အော်ဂဲနစ် ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
2. စိုက်ပျိုးရေး- စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များတွင် ပဋိဇီဝဆေးများ၊ စိုက်ပျိုးရေးဟော်မုန်းများ၊ အဏုဇီဝပိုးသတ်ဆေးများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ၏ ကစီဓာတ်ပါဝင်မှုစသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
3. ဆေးပညာ- ပဋိဇီဝဆေးများ၊ ဗီတာမင်များ၊ ဂလူးကို့စ်နှင့် အခြားဆေးဝါးများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆိုင်ရာ ဆေးပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှု။
4. အစားအစာ- သကြား၊ monosodium glutamate၊ ပဲငံပြာရည်နှင့် အခြားသော ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကုန်ချောစစ်ဆေးခြင်း၊ အစားအစာ သကြားပါဝင်မှု ပြဋ္ဌာန်းခြင်း။
5. ရေနံ- ဓာတ်သတ္တုဆီ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ရေနံစော်ဖောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
6. မွှေးရနံ့ - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
7. ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ- ဆေးရုံများရှိ ဆေးခန်းများတွင် ဆီးချိုရောဂါကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
Shanghai Jiahang ဒစ်ဂျစ်တယ် Polarimeter တွင် ထည့်သွင်းထားသော Peltier တိကျသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ပါရှိပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် အပူချိန်တွင် စမ်းသပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။ built-in အလိုအလျောက် ချိန်ညှိခြင်း ပရိုဂရမ်သည် ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ စံအလိုအလျောက် ချိန်ညှိကိရိယာကို -45 ဒီဂရီမှ +45 ဒီဂရီအထိ အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်ပြီး နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်သော တိုင်းတာမှုတိကျမှုအတွက် အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်ကို အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ Shanghai Jiahang အလိုအလျောက် polarometer ၏ အဆင့်များစွာသော အာဏာပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုသည် စာရင်းစစ်ခြေရာခံခြင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
Jiahang ဒစ်ဂျစ်တယ် Polarimeter သည် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ TART အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ISO အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲမူပိုင်ခွင့် 10 ကျော်နှင့် တူရိယာတစ်ခုစီတွင် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် မူပိုင်ခွင့်များစွာကို ရရှိထားသည်။
7. ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဥရောပနှင့် အမေရိကမှ ပြန်လာသော ထိပ်တန်း R&D အဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထူးချွန်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့နှင့် သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ သုံးစွဲသူများအား နည်းပညာမြင့်၊ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ထိရောက်သော၊ အဆင်ပြေသော၊ ဘက်စုံကြိုတင်ရောင်းချမှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ နှင့် ရောင်းပြီးနောက်ပိုင်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများ။
မေး- မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက ဒစ်ဂျစ်တယ် Polarimeterr ကို ဘယ်နှစ်နှစ်လောက် လုပ်ထားတာလဲ။
A- သိပ္ပံနည်းကျ တူရိယာထုတ်လုပ်သူ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းဖြေရှင်းချက်ပေးသူ ၂၂ နှစ်။
A-Jiahang သည် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ TART အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ISO အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲမူပိုင်ခွင့် 10 ကျော်နှင့် တူရိယာတစ်ခုစီတွင် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် မူပိုင်ခွင့်များစွာကို ရရှိထားသည်။
မေး-မင်းရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ပြသဖို့ ပြပွဲကို တက်ရောက်မှာလား။
A-ဟုတ်ကဲ့ï¼Œ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်အသစ်များကို မိတ်ဆက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားသော ပြပွဲအချို့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ Arablabã€ PICCTONã€ Analytica Russiaã€ Lab Africaã€ Analytica Germanyã€ Analytica Latin America စသည်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်မျှော်လျက်ရှိပါသည်။ သင်၏လည်ပတ်မှု။
မေး-သင့်ကုမ္ပဏီ၏ R&D ခွန်အားကရော ဘယ်လိုလဲ။
A-ခိုင်မာသော R&D နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များ ပိုင်ဆိုင်ထားသူ (လူ 20 ကျော်ရှိသော R&D အဖွဲ့၊ ပျမ်းမျှ ပါရဂူဘွဲ့ဒီဂရီ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်များမှ ဘွဲ့ရ၊ ပျမ်းမျှ အလုပ်အတွေ့အကြုံ 8 နှစ်) နှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
A-OEM စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ထုတ်ကုန်တွင်ပါရှိသောဆော့ဖ်ဝဲသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆက်တင်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
မေး-သင်သည် ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူလား။
A-100% ထုတ်လုပ်သူ၊ အလယ်အလတ်သမားများနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများသည် စျေးနှုန်းကွာခြားချက်မရှိပါ၊ အရင်းအမြစ်စက်ရုံ၏စျေးနှုန်းသည် အလွန်အကျိုးရှိပါသည်။ Jiahang သည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းတွင် ရုံးချုပ်ဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ခွဲ ၁၅ ခုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ ၂ ရုံရှိပြီး နိုင်ငံရပ်ခြား ၁၀ နိုင်ငံကျော်တွင် ရောင်းချလျက်ရှိသည်။
မေး-မင်းရဲ့ ပေးပို့ချိန်က ဘယ်လိုလဲ။
A-"ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သင်၏ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်7မှ 15 ရက်အထိကြာလိမ့်မည်။ အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပါသည်။"
A-ကျွန်ုပ်တို့သည် ငွေပေးချေမှုကို L/C၊ TF၊ Paypal၊ Western Union စသည်တို့ဖြင့် လက်ခံနိုင်သည်။
A-ကျွန်ုပ်တို့သည် အွန်လိုင်း ညွှန်ကြားချက်များကို ပေးနိုင်သည် ; ဗီဒီယို-ca သို့မဟုတ် အသံ-ချတ်ဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပံ့ပိုးမှု။
A-ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော သုံးစွဲသူတိုင်းသည် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို သင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် ဈေးနှုန်းစမ်းသပ်ခွင့်ကို ပေးဆောင်မည်ဟု ကတိပြုပါသည်။
A-သင့်အား စိတ်ပူစရာမရှိသော အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ပို့ဆောင်နိုင်ရန် တရားဝင်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အညီ တရားဝင်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအာမခံချက်စာရွက်စာတမ်းများ ပေးဆောင်ပါ။
hot Tags:: ဒစ်ဂျစ်တယ် Polarimeter၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ ဈေးနှုန်း၊ CE